အိမ်ထောင် မပြုခင် ဘာတွေကို ဆေးစစ်မှု လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာ ..... ~ ITmanHOME
00:55 BodyHealth, health No comments
အိမ်ထောင် မပြုခင် ဘာတွေကို ဆေးစစ်မှု လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာ .....
အိမ်ထောင် မပြုခင် ဘာတွေကို ဆေးစစ်မှု လုပ်သင့်လဲ ဆိုတာ .....( အချစ်မှာ မျက်စိ မရှိပါဆိုသူများအတွက်တော့ မပြောလို ပါ )
1. Chromosomal Disorder (Blood Karyotyping)
Chromosome ဆိုတာကတော့ ခန္ဓာကိုယ် လုပ်ငန်း ဆောင်တာ အားလုံးရဲ့ မျိုးရိုး ဗီဇ သော့ချက် တွေကို ထိန်းချုပ် တဲ့ အရာပေါ့ဗျာ။ ဒီကောင် တွေ အစီအစဉ် မကျဖြစ်တော့ ကလေးမယ် ဒုက္ခ ရောက်ရ တော့တာပေါ့။ စာရှုသူတို့ သိနေပြီးတဲ့ Downs Syndrome ဆိုတာ ဒီကောင်တွေ တလွဲ ဖြစ်ရ လို့ပေါ့။ (Downs Syndrome ) ကတော့ အမေ အသက် ကြီးမှ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ရင်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်)
Karotyping ဆိုတာကို ဘာကြောင့် လုပ်လဲ ဆိုတော့ -
မိဘမှာ ကလေးကို ဒုက္ခ ပေးနိုင်မယ့် ပုံမှန် မဟုတ်တဲ့ Chromosome ရှိမရှိ စမ်းသပ် ဆုံးဖြတ်ချင်တဲ့အခါ
အမေကို ကိုယ်ဝန် မရနိုင်အောင် (သို့) ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျ အောင် လုပ်နိုင်တဲ့ Chromosome ချို့ယွင်းချက် ရှိမရှိ ထစသဖြင့် စမ်းသပ် စစ်ဆေး ချင်တဲ့အခါ မျိုးတွေ မှာ လုပ်ပါတယ်။
2. Thalassemia Test
Thalassemia ဆိုတာ ကတော့ မိဘများကနေ သားသ္မီးဆီကို မျိုးရိုး ဗီဇကြောင့် ဖြစ်သွား ရတဲ့ သွေးရောဂါ တမျိုးပါပဲ။ (ဆွေမျိုးနီးစပ်ချင်း အိမ်ထောင် ပြုတဲ့ အခါမျိုးမှာ ဖြစ်တတ် ပါတယ်)
ဒါ့ကြောင့် ဘယ်သူမှ ပြုပြင် ပြောင်းလဲ နိုင်စွမ်း မရှိတဲ့ နိယာမ (၅)ချက် ထဲက တစ်ခုအပါအ၀င် ဖြစ်တဲ့ ဒီ ဗီဇနိယာမကို ကြိုတင် သိရှိ ဆင်ခြင်ခြင်း ဖြင့်သာ ကာကွယ် နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
3. HIV ပိုးရှိမရှိစစ်ခြင်း
မြင်ရုံနဲ့တော့ သန့်မှန်း မသိနိုင်ဘူး ဆိုသလို ပါပဲ … ဒီပိုး ရှိသူ အများစုဟာ ကိုယ်ကိုယ်ကို ပိုးရှိ နေမှန်း မသိကြပါဘူး ။ သွေးစစ် ရင်တောင် မှ HIV Antibody Test ကို စစ်လို့ ရှိရင် ခန္ဓာကိုယ် ထဲကို ပိုးစ ၀င်တဲ့ (၆) ပါတ်ကနေ (၁၂)ပါတ်ထိမ တွေ့ နိုင်ပါဘူး။ တချို့မှလည်း (၆)လ ထိတိုင်အောင် မတွေ့ရ ပါဘူး။ ဒီကာလကို Window period လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကိုယ်ထဲကို ပိုးက ၀င်နေပေမယ့် ခန္ဒာကိုယ် ကနေ ဒီပိုးကို တုန့်ပြန်တဲ့ ပဋိပစ္စည်း Antibody က မထွက်သေးတော့ ဆေးစစ်တဲ့အခါမှာ Negative ပြနေပါတယ်။ Antigen Test (သို့) PCR TEST ကို စစ်ရင်တော့ (၂)ပါတ် ကနေ (၃)ပါတ် အတွင်းမှာ ဒီပိုး ကူးစက်ခြင်း ရှိမရှိ ဆိုတာကို သိနိုင်ပါတယ်။ ဒီ ရောဂါပိုး ဟာ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ကူးစက် နိုင်တဲ့ အပြင် မွေးဖွားလာမယ့် ကလေးကိုပါ ကူးစက် နိုင်ပါတယ်။
4. အသဲရောင်အသားဝါ ဘီပိုး နဲ့ စီပိုး (Hepatitis B & C) ကိုစစ်ခြင်း
ဒီပိုးတွေကလည်း HIV ပိုးလိုပဲ လိင် ကနေ တဆင့် ကူးစက် နိုင်တာကြောင့် ကြိုတင် စစ်ဆေး သင့်ပါတယ်။ ဒီပိုးတွေက အသဲရောင် အသားဝါ ရောဂါကို ဖြစ်စေရုံ သာမက ဘဲ အသဲခြောက်ခြင်း နဲ့ အသဲကင်ဆာ တို့ အထိ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
5. VDRL Test (ကာလသား ရောဂါပိုး အတွက် စစ်ခြင်း)
အမေ လုပ်တဲ့သူမှာ ကာလသား ရောဂါရှိနေရင် ကလေးတွေ့ရဲ့ တစ်ဝက် နီးပါးဟာ မမွေးခင် မှာဖြစ်စေ မွေးပြီးတဲ့ နောက်မှာ ဖြစ်စေ အသက် သေဆုံး နိုင်ပါတယ်။ အသက် ရှင်ခဲ့ရင်လဲ ကလေးဟာ ကြီးထွားမှု နှေးကွေး တာတွေ ၊ အမြင် / အကြား အာရုံတွေ ချို့ယွင်း တာတွေ … စသ ဖြင့် ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ် ကာလမှ စောစောစီးစီး စီစစ်မိပြီး antibiotics ပိုးသတ်ဆေး အသုံးပြုမယ် ဆိုရင်တော့ ရောဂါ ပျောက်ကင်း နိုင်ပါတယ်။
Thyroid ဆိုတာက gland (အကျိတ် တခု) ပဲ။ သူကနေပြီးတော့ Thyroid Hormone ဆိုတဲ့ ဟော်မုန်း တမျိုးထွက်တယ်။ ဒီ ဟော်မုန်း က ခန္ဒာကိုယ် ရဲ့ ဇီဝကမ္မ ဖြစ်ပျက် အားလုံးမှာ ပါဝင်ရတဲ့ ဟော်မုန်း ပဲ။ ကလေးတွေအတွက်က ခန္ဓာကိုယ် ကော ဦးနှောက် ကော ဖွံဖြိုးဖို့ရာ အတွက် အရမ်း လိုအပ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ဆောင်စဉ်မှာ ဒီဟော်မုန်း က နည်းနေရင် ကလေးမှာက ဥာဏ်ရည် မမီတာတွေ ၊ ဖွံဖြိုးမှု နှေးတာတွေ … စသဖြင့် ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင် မပြုမီက တိုင် ဒီဟော်မုန်းတွေ နည်းမနည်း ကြိုသိ ထားတဲ့အခါ ကြိုတင် ကာကွယ်မှု ပြုလုပ် နိုင်ပါတယ်။
7. သွေးချိုဆီးချို ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း (Blood Sugar)
အမေ လုပ်တဲ့သူမှာ ၎င်းရောဂါ ရှိနေရင် ကိုယ်ဝန်ဆောင် တဲ့အခါမှာ ကလေးကော အမေအတွက်ပါ အန္တရာယ် ရှိနိုင်ပါတယ်
8. Male Fertility Test
အမျိုးသား၏ သုတ်ထဲတွင် ပါသော သုတ်ကောင် (Sperm) များ ၏ အရည်အသွေး စွမ်းဆောင်ရည် သည် ကိုယ်ဝန် ရနိုင် စေခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း
9. Female Fertility test
အမျိုးသမီးကို ကိုယ်ဝန် ရနိုင်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးခြင်း (အမျိုးသမီး ၏ ရာသီစက်ဝန်း (၃) ရက်မြောက် နေ့တွင် (Day3FSH test ) ဆိုသည့် (Follicle Stimulating Hormone) ကို စစ်ဆေး တိုင်းတာခြင်း။
ဒီလောက်ဆိုရင် ရလောက်ပါပြီလို့ ယူဆမိပါသည် ။